Soosaarka iyo Warshadda Shiinaha Hexaphenoxycyclotriphosphazene | Mingxing
CAS MAYA ： 1184-10-7
Qaaciddada Molecular: C36H30N3O6P3
Muuqaal: Budada cad ee cad
Mawduuca: ≥ 99%
Hexaphenoxycyclotriphosphazenewuxuu leeyahay qaab-dhismeedka isku-dhafan ee P, n, oo muujinaya xasillooni heerkeedu sareeyo, dib-u-dhac olol, xaddidaad xaddidan oo oksijiin ah (LOI) iyo waxqabadka qiiqa oo yaraada. Waa dib-u-habeyn olol la'aan ah halogen-la'aan. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cusbada epoxy, laminate la huwiyay naxaas, diode nalka iftiinka dhaliya ee loo yaqaan 'LED light', dahaadhka budada, walxaha dheriga iyo walxaha polymerka ah. Waa nooc ka mid ah waxyaalaha wanaagsan ee ka-hortagga dabka iyo walxaha is-deminta
Badeecadani waa wax olole ah oo aan halogaan lahayn, oo inta badan loo isticmaalo PC, PC / ABS resin, PPO, nylon iyo waxyaabo kale. Marka sheygan loo isticmaalo kombuyuutarka, marka maadada hpctp ay tahay 8-10%, darajada olol celinta alaabtu waxay gaaraysaa FV-0; badeecadani sidoo kale waxay leedahay saameyn wanaagsan oo ololka ololka ku leh cusbada epoxy, waxaana loo isticmaali karaa in lagu diyaariyo EMC baakidh ballaaran oo isku dhafan oo isku dhafan, iyo wax qabadkeeda ololka ayaa aad uga wanaagsan tan nidaamka fosfooraska bromine ololka reardant; sheygan waxaa loo isticmaali karaa Benzoxazine Resin galaas maro laminate ah, oo markuu ka kooban yahay maadada hpctp 10%, darajada ololku wuxuu gaarayaa FV-0 Badeecada waxaa loo isticmaali karaa polyetylen, qiimaha LOI ee maadada polyetylenka ololku wuxuu gaari karaa 30 ~ 33 ; badeecada waxaa lagu dari karaa xalka miiqda fijarka viscose si loo helo fiber viscose olol celiya oo leh index oxidation oo ah 25.3 ~ 26.7
Badeecadani waa nooc ka mid ah isku dhafka P iyo N oo ah qalfoofka aasaasiga ah. Qaab dhismeedkeedu wuu xasilloon yahay, mana jiraan wax dhibaato ah oo wasakhda halogen ah. Markay gubato, asal ahaan ma jiro gaas sun ah iyo masiibooyin labaad.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dareeraha dareeraha, waxayna u adkeysan kartaa heerkulka sare, biyaha iyo saliida muddo dheer.
Waxay leedahay dib udhac olol wanaagsan iyo isugeyn yar. Guud ahaan, marka ay ka kooban tahay BDP-da 8-10%, heerka wax-soo-saarka ololku wuxuu gaari karaa FV-0, oo ah 50% BDP iyo RDP.
Sababtoo ah qaabdhismeedka xasilloonida iyo qaddarka yar ee lagu daro, astaamaha alaabooyinka iyo walxaha kale lama beddelo inta lagu jiro isticmaalka.
Badeecadani waa kareem cad. Uma baahna in la kululeeyo inta lagu jiro isticmaalka, umana baahna xirxirnaan gaar ah oo gaadiid ah. Way ku habboon tahay isticmaalka iyo gaadiidka.
Xirxirida: 20kg / bac
Awood sanadeed: 500 tan / sanadkii
Xiga: Poly (diphenoxy) phosphazene